INtshumayeli – 2fish
ekhaya / Bible / iTestamente endala / INtshumayeli
1:1 Amazwi kwiNtshumayeli, unyana kaDavide, ukumkani waseYerusalem.
1:2 INtshumayeli uthe: Amampunge leze! Amampunge leze, kwaye yonke into ingamampunge!
1:3 Yintoni ngaphezulu umntu anayo emigudwini yakhe yonke, njengoko aphuka yiyo yena phantsi kwelanga?
1:4 Kukho isizukulwana lidlula, isizukulwane ifika. Kodwa ihlabathi limi ngonaphakade.
1:5 Kuphuma ilanga iiseti; ibuyisela endaweni yayo, ukusuka apho, ukuzalwa ngokutsha,
1:6 kuba ijikeleza nge ezantsi, kunye jike ngasentla. Umoya siyaqhubeka, ekhulisa into ukujikeleza kwalo, zijike kwakhona kumjikelo yayo.
1:7 Yonke imilambo kungena elwandle, kwaye ulwandle akukho kukuntywilisela. Endaweni eya kuyo imilambo ukuphuma, babuyele, ukuze kungena kwakhona ukuba.
1:8 izinto ezinjalo nzima; umntu akanako ukucacisa kubo ngamazwi. Le Iliso alaneli kukubona, yaye indlebe zagcwaliswa kukuva.
1:9 Yintoni na ukuba khona? Uya khona kwixesha elizayo. Yintoni na loo nto iye? Lowo uya kuqhubeka ukuba kwenziwe.
1:10 Akukho nto intsha phantsi kwelanga. Akekho umntu akwazi ukuthetha: "Khangela, intsha le nto!"Kuba sele yenziwe sele aphuma emaphakadeni phambi kwethu.
1:11 Akukho kukhumbula izinto zangaphambili. Kanjalo, nabasemva abaya kubakho, abayi ingxelo yezinto elidlulileyo kwixesha elizayo, abo baya kubakho kule kanye ekupheleni.
1:12 I, INtshumayeli, waba ngukumkani wamaSirayeli, eYerusalem.
1:13 Kwaye ndandizimisele engqondweni yam ndayinikela ukuba ingxoke, ukuphanda ngobulumko, Ikukucetywa into yonke into eyenzekayo phantsi kwelanga. UThixo usinike lo msebenzi unzima kakhulu oonyana babantu, ukuze mayihlalwe nguye.
1:14 Ndizibonile zonke izinto ezenziwayo phantsi kwelanga, khangela: yonke loo nto ingamampunge i iintsizi umoya.
1:15 Ezonakele bengazimisele ukuba ukulungiswa, kwaye inani wesimathane olungathethekiyo.
1:16 Mna ndithethile entliziyweni yam, bathi: "Khangela, I baye baphumelela ubukhulu, kwaye mna ngaphaya zonke izilumko ezibe phambi kwam eYerusalem. "Kwaye engqondweni yam iye echazwe ngobulumko izinto ezininzi, yaye ndiye ndafunda.
1:17 Kwaye ndinikela intliziyo yam, ukuze nazi, oqiqayo, imfundiso, kwaye kananjalo ngephutha nokumatha. Kodwa ndiyakuqonda ukuba, kwezi zinto nabo, kukho ubunzima, kunye iintsizi umoya.
1:18 Ngenxa yale nto, nge bobulumko kukho kwakhona umsindo kakhulu. Ke ubani athi ulwazi, lwenza ubunzima.
2:1 Ndathi mna entliziyweni yam,: "Ndiya kuphuma zigcwale eniyolisa, yaye ndiya kuxhamla izinto ezilungileyo. "Ndabona ukuba le, kakhulu, i yobubanzi.
2:2 ukuhleka, Ndaziqiqa imposiso. Nokuba nemihlali, ndithe: "Kutheni na ukuba undikhohlise, ngokungenanjongo?"
2:3 Ndagqiba entliziyweni yam ukurhoxisa inyama yam ngewayini, ukuze ndibe ukuze ingqondo yam ubulumko, babuye umva ubudenge, Ndide ndibone ukuba yintoni na luncedo oonyana babantu, noko kufanele ukuba benze phantsi kwelanga, ngexesha inani lemihla yobomi babo.
2:4 I mkhulu imisebenzi yam. Ndazakhela izindlu, ndatyala izidiliya.
2:5 Ndazenzela amasimi nemiyezo. Mna ndatyala kuyo imithi yonke uhlobo.
2:6 Kwaye embiweyo fishponds amanzi, ukuze ndibe ukuze unkcenkceshele nehlathi kwanemithi ezikhulayo.
2:7 Ndesuka ndenzelwa amadoda kunye nabafazi nezicaka, kwaye waba nentsapho enkulu, kwakunye nemihlambi yeenkomo nemihlambi emikhulu yezimvu, ngaphezu kwabo bonke ababengaphambi kwam eYerusalem.
2:8 I uyiqwebe ngokuba mna isilivere negolide, yaye ubutyebi kookumkani neerhuluneli. I wanyula amadoda nabafazi singers, neziyolo zoonyana babantu, neendebe nemiphanda ngenjongo iwayini ukugalelwa.
2:9 Kwaye Ugqwesile kubunewunewu kwabo bonke ababengaphambi kwam eYerusalem. nobulumko bam wanyamezela nam.
2:10 Kwaye lufuneka konke amehlo am, Andizange zifakwe. Andizithambisanga, vala intliziyo yam ukunandipha yonke into anayo, kwaye ezihlekisayo ngokwayo izinto alenzileyo. Ndaza nam andabakhathalela oku nesabelo sam, ngokungathi babesenza ukusetyenziswa zomsebenzi yam.
2:11 Kodwa xa Ndazijika mna, kuyo yonke imisebenzi izandla zam wayenze, kunye imisebenzi apho ndandiye perspired ngokungenanjongo, Ndabona ingamampunge iintsizi umphefumlo ezintweni zonke, yaye ayikho into ngokusisigxina phantsi kwelanga.
2:12 I waqhubeka, ukuze sicamngca ngobulumko, kwakunye imposiso nokumatha. "Uyintoni na umntu," Ndithe, "Ukuba wayeza kuba nako ukulandela kuMenzi wakhe, ikumkani?"
2:13 Ndabona ukuba ubulumko bubalaselayo bubudenge, ngokokude ahluke kangangoko ukukhanya nobumnyama.
2:14 Amehlo zomntu yezilumko intloko yakhe. Umntu osisiyatha uhamba ebumnyameni. Kodwa ndafumanisa ukuba omnye uza kudlula emke enye.
2:15 Ndathi mna entliziyweni yam,: "Ukuba ukufa zombini izidenge ndiya kuba, Kuyinzuzo njani mna, ukuba ndininike ngokwam ngakumbi ngocoselelo umsebenzi nobulumko?"Mna ke wayethetha phakathi engqondweni yam, Kwanaloo nto ndayiqonda, kakhulu, i yobubanzi.
2:16 Kuba akukho akusayi kubakho kukhunjulwa ngalo, libhange bezilumko, okanye yezinyabi. Kwaye ngamaxesha elizayo lugquma yonke into ndawonye, nge zisabonakala. I die bafunda ngendlela efanayo yongenakwazi.
2:17 and, ngenxa yale nto, ubomi bam undidinisile, kuba ndabona ukuba zonke izinto phantsi kwelanga ububi, kwaye yonke into engenanto kunye iintsizi umoya.
2:18 Kwakhona, I ndanezothe yonke imigudu yam, yi yiyo ngokunyanisekileyo phantsi kwelanga, ukuba athathwe yi indlalifa emva kwam,
2:19 nangona andazi nokuba uya kuba sisilumko okanye uya kuba sisidenge. Yaye ke iya kuba namandla phezu ngokubulaleka kwam konke, apho ndifane ndabulaleka kwaye baba nexhala. Kwaye kukho nantoni na eyenye engenanto kangaka?
2:20 ngoko ke, andiyekanga, kwaye nentliziyo yam bamlahla niyancedisa phantsi kwelanga.
2:21 Kuba xa umntu esaphuka ngobulumko, kunye nemfundiso, nobuhlakani, ebashiya ngasemva oko ufumene omnye lowo lutho. Ngoko lo, kakhulu, nto ingamampunge nomthwalo omkhulu.
2:22 Kanjani ukuba umntu inzuzo emigudwini yakhe yonke kunye iintsizi komoya, apho iye bathuthunjiswe phantsi kwelanga?
2:23 Yonke imihla yakhe ziye ezele inomvandedwa kunye nobunzima; kukwanjalo ke kuphumla ingqondo yakhe, nasebusuku. Kwaye le nto yanto?
2:24 Akusilungele na kanye ukuba badle, basele, nokubonisa umphefumlo wakhe izinto ezihle ngemigudu yakhe? Kwaye oku ivela esandleni sikaThixo.
2:25 Ngoko ke oya kudla isonka kunye zigcwale neziyolo kangangoko ndinako?
2:26 UThixo usinike, ukuba umntu olungileyo phambi kwakhe, ukuhlakanipha, kunye nolwazi, nemihlali. Ke yena umoni, umnike imbandezelo angeyomfuneko kuyakhathaza, ukuze nongeze, nokuba abuthele, hambisa, kuye lowo eye yanelisa uThixo. kodwa lo, kakhulu, nto ingamampunge okukhathazayo umngxuma bengqondo.
3:1 Zonke izinto babe ixesha labo, kunye nezinto zonke phantsi kwezulu kuqhubeka ngexesha lekhefu labo.
3:2 Ukuzala kunexesha lako, kunexesha lako. Ukutyala kunexesha lako, nexesha kume into esiyityeleyo.
3:3 Kunexesha lako, kunye kunexesha lako. Kunexesha lako, nexesha lako.
3:4 A ixesha ukulila, kukho nexesha lokuhleka. Kukho ixesha lokulila umbambazelo, kukho nexesha lokudloba.
3:5 Kukho ixesha lokuchithachitha amatye, kukho nexesha lokufumba. A kunexesha lako, kunye nexesha ukuba kude lako.
3:6 A ithuba lokuzuza, kunexesha lako. Ukugcina kunexesha, kunye nexesha lako.
3:7 Ukukrazula kunexesha, nexesha lako. Kukho ixesha lokuthi cwaka, yaye ukuthetha ixesha.
3:8 Ukuthanda kunexesha, kunye nexesha intiyo. Kukho ixesha lemfazwe, kukho nexesha loxolo.
3:9 Yintoni ngaphezulu umntu anayo emigudwini yakhe?
3:10 Ndiyibonile inkxwaleko uThixo awunike oonyana babantu, ukuze babe ekuhlala kuyo.
3:11 Uye wenza zonke izinto uzenze zantle ngexesha lazo, yaye uye wanikelwa ihlabathi ukuba iingxabano zabo, ukuze umntu engafumani isenzo asenzayo uThixo, athabathele ekuqaleni, kude kube sekupheleni.
3:12 Kwaye ndiyaqonda ukuba akukho nto ilungileyo phakathi kwabo, ingekukuvuya, nokuzizuzela okulungileyo ebomini.
3:13 Kuba oku sisipho esivela kuThixo: xa umntu ngamnye uzidlela aziselele, kwaye ubona iziphumo okulungileyo ngemigudu yakhe.
3:14 Ndiye ndafunda ukuba yonke imisebenzi uThixo wenze uqhubeke, phakade. Asinako ukuba wongeze into, okanye ukuphungula nantoni na, kwezo zinto, uThixo wenze ke ukuze bakoyike.
3:15 Yintoni esele yenziwe, okufanayo iyaqhubeka. Yintoni na kwixesha elizayo, sele likhona. UThixo embuyisela zidlule.
3:16 Ndabuya ndabona phantsi kwelanga: kunokuba yomgwebo, ihlazo, kwaye endaweni yobulungisa, ububi.
3:17 Ndathi mna entliziyweni yam,: "UThixo uza kugweba kwabalungisayo abangahloneli Thixo, ke ngoko ixesha senkqunto ngamnye uya kuba njalo. "
3:18 Ndathi mna entliziyweni yam,, malunga oonyana babantu, ukuba uThixo wayeza kuwaphungula, ubonise ukuba babe njengezilwanyana zasendle.
3:19 Ngesi sizathu, ngokusweleka kude awabantu naweenkomo yenye, kunye nemeko bobabini ilingana. Ngokuba njengoko indoda yafa, ngokunjalo nabo benza ukuba bafe. Zonke izinto uphefumle ngendlela efanayo, yaye umntu nto ngaphezu eziphilileyo; ngokuba zonke ezo zinto kokungelutho.
3:20 Kwaye zonke izinto iqhubeka ukuya kwindawo enye; ngokuba ukusuka emhlabeni zazenziwe, kwaye baya kubuyela ndawonye umhlaba.
3:21 Ngubani owaziyo ukuba umoya woonyana babantu, ukuba uyenyuka na uye phezulu, Ukuba nomoya wenkomo, ukuba uyehla na uye phantsi?
3:22 Kwaye ndiye ndafumanisa nto ibe ilunge ngaphezu kokuba umntu avuye ezenzweni zakhe: ngokuba kusisabelo sakhe oko. Ngubani uya kongeza kuye, ukuze sizazi izinto eziya kwenzeka emva kwakhe?
4:1 Ndazijika mna, ukuba ezinye izinto, kwaye ndabona ngezityholo zobuxoki okwenziwa phantsi kwelanga, kunye iinyembezi kwabamsulwa, kwaye kungekho namnye ngokundithuthuzela kuzo; nokuba azaba nako ukumelana nogonyamelo lwabo, nangeengaga zonke uncedo.
4:2 Kwaye, Mna ngakumbi kade, kunabahleliyo.
4:3 Bonwaba ngaphezu zombini ezi, I sendide ndamgweba ukuba, lowo ungekabikho kuzalwa, nongakhange ezingekabonwa ububi okwenziwayo phantsi kwelanga.
4:4 Kwakhona, Mna uyayondela yonke imisebenzi zabantu. Ndamthabatha isaziso ukuba abazenzayo zisingisele ingumona wokwanyelana yabo. Kwaye, kule, kakhulu, kukho yize nexhala eyolukileyo.
4:5 Umntu osisinyabi nezibaya izandla zakhe kunye, yaye kudla inyama yakhe, bathi:
4:6 "A ukuzalisa sandla ngokuphumla kubhetele izandla zozibini ezele kukubulaleka kunye iintsizi komphefumlo."
4:7 Nakuba kokufunda lesi, Ndaphinda ndathi phithi, ndabona amampunge phantsi kwelanga.
4:8 Nguye enye, yaye awukabi nayo i yesibini: They are, akukho mzalwana. Ukanti yena akafuni ayeke ukusebenza, yaye amehlo akhe angahluthiyo noko bubutyebi, akamfuni umntu ibonisa, bathi: "Kuba bani na okanye nibaqhathe umphefumlo wam izinto ezilungileyo?" Kule, kakhulu, nto ingamampunge lentsizi kakhulu nzima.
4:9 ngoko ke, kungcono ukuba ababini ukuze babe kunye, kunokuba umntu abe yedwa. Ngokuba kuzazi nabo.
4:10 Xa omnye ethe, uya kuxhaswa yi enye. Yeha ke lowo uyedwa. Kuba xa iwa, ke akukho bani phakamisa kuye phezulu.
4:11 Ukuba ababini balele, ke omnye efudumeleyo kwenye. na umntu oyedwa afudunyezwe njani?
4:12 Ke ukuba umntu unako wamgagamela oyedwa, ezimbini ukuze ukumelana naye, nomtya entlu yaphulwe nzima.
4:13 Ulungile umfana, olihlwempu elumkile, ngaphezu kokumkani, ubudala, esisidenge, Ngubani na ongazaziyo ukukhangela phambili ngenxa mva.
4:14 Kuba ngamanye amaxesha, elinye eliphuma entolongweni nezidanga, ukuba umbuso, kanti elinye, wazalwa ukuba semandleni, Ngokuba buphelile isidingo.
4:15 Ndababona bonke abadla ubomi, behamba phantsi kwelanga, kwaye ndabona kwisizukulwana esilandelayo, ngubani na oya kunyuka kwiindawo zazo.
4:16 Inani labantu, ngaphandle bonke khona phambi kwezi, into zase. Kwaye abo baya kubakho emveni akayi kuvuya kuzo. kodwa lo, kakhulu, nto ingamampunge i iintsizi umoya.
4:17 Lulondoloze unyawo lwakho, xa ungena endlwini kaThixo, ukusondela, ukuze uphulaphule. Ngokuba ukulalela kungcono kakhulu imibingelelo yezinyabi, abantu abangamaziyo ububi ukuba abazenzayo.
5:1 Kufuneka ukuthetha nantoni na ngokungxama, yaye kufuneka intliziyo yakho ingaphangi ukubeka ilizwi phambi koThixo. Ngokuba uThixo usemazulwini, kwaye wena emhlabeni. Ngesi sizathu, amazwi akho makabe mancinane.
5:2 Amaphupha landela ukukhathazeka ezininzi, kwaye amazwi amaninzi ubudenge iya kufunyanwa.
5:3 Ukuba isifungo nantoni na kuThixo, kufuneka ungalibali ukuba ndokuhlawula. Kwaye nantoni na isithembiso, nikeza it. Kodwa isithembiso ongathembekanga, esisidenge alumkholisi.
5:4 Kwaye ke kungcono kakhulu ukuba wenze isifungo, ngaphezu, emva kokuba isithembiso, ukuba ukuzalisekisa wathenjiswa into.
5:5 Kufuneka asebenzise umlomo wakho ukwenzela ukuba uyonise inyama yakho esonweni. Kwaye akufunekanga athi, emehlweni Yingelosi, "Akukho Providence." UThixo, ukuba noburhalarhume ngamazwi akho, ubachithachithe yonke imisebenzi yezandla zenu.
5:6 Apho kukho amaphupha ezininzi, kukho amampunge amaninzi kunye namagama ezininzi. kodwa ngokwenene, uze umoyike uThixo.
5:7 Ukuba ubona izityholo zobuxoki nxamnye bahluphekayo, namasiko enogonyamelo, yaye ondigobileyo ubulungisa kurhulumente, musa ukumangaliswa kule meko. Kuba abo iindawo eziphakamileyo nabanye liphezulu, kwaye kukho nabanye, luchazwa ngaphezulu, phezu kwezi.
5:8 kodwa ekugqibeleni, kukho nguKumkani olawula phezu komhlaba wonke, leyo ke eya kuxhomekeka kuye.
5:9 Umntu obawayo abayi uyaneliswa imali. Yaye nabani na othanda ubutyebi uya kuvuna siqhamo kulo. ngoko ke, lo, kakhulu, i yobubanzi.
5:10 Apho kukho ubutyebi ezininzi, kuya kuba abanye ukuba ezi zinto. Kwaye Kuyinzuzo njani lowo anazo, ngaphandle ukuba abe nembono ubutyebi ngamehlo akhe?
5:11 Ukulala sanencasa umntu osebenza, nokuba kubadle kancinane okanye kakhulu. Kodwa satiation umntu osisityebi akayi akumvumeli ukuba alale.
5:12 Kukho nangelinye ukugula kakhulu umthwalo, endibubonileyo phantsi kwelanga: ubutyebi kugcinwa umonakalo yomnini.
5:13 Kuba ulahlekile imbandezelo ezinzima. Ayivelisileyo unyana, ngubani na oya kuba nanto kakhulu.
5:14 Kanye njengoko waphuma ze ukususela esibelekweni sikanina, uzakwenza njalo kubuya, awuthabathe nto naye emisebenzini yakhe.
5:15 Kuyinto yokugula mpela ezilusizi, ngendlela efanayo njengoko ifikile, uzakwenza njalo kubuya. Kuyinzuzo njani ke yena, ekubeni owaphukela umoya?
5:16 Yonke imihla yobomi bakhe kubadle: ebumnyameni, kwaye ngenxa yokukhathazeka ezininzi, kwaye sibandezelekile ngokunjalo lusizi.
5:17 Kwaye, oku kwabonakala kulungile kum: ukuba umntu adle, asele, kwaye kufuneka sinandiphe iziqhamo zomsebenzi wakhe, apho aye apha phantsi kwelanga, kuba inani lemihla yobomi bakhe ukuba uThixo umnike. Ngokuba kusisabelo sakhe oko.
5:18 Kwaye oku sisipho esivela kuThixo: ukuba wonke umntu, athe uThixo wamnika ubutyebi kunye nezibonelelo, yaye aye unikwe ubuchule kubadla ezi, bangaba khona isabelo sakhe, sifumane uvuyo emisebenzini yakhe.
5:19 Kwaye ke akayi kuzikhumbula ngokupheleleyo imihla yobomi bakhe, ngokuba uThixo eluphendula intliziyo yakhe eniyolisa.
6:1 Kukho nolunye ububi, endibubonileyo phantsi kwelanga, yaye, kanjalo, buninzi ke phezu komntu.
6:2 Kuyinto umntu, athe uThixo wamnika ubutyebi, kunye nezibonelelo, nodumo; kwaye kuzo zonke into engayinqwenelayo, akukho nto-nye uyisweleyo ubomi bakhe; aze uThixo angayiphi umfumanise ukukwazi kubadla ezi zinto, ngokuba idliwa endaweni umntu aya kubadla. Le nto yanto yaye namashwa enkulu.
6:3 Ukuba mntu ukuvelisa abantwana ikhulu, kwaye ubomi iminyaka emininzi, nokuba bafumane kwixesha leentsuku ezininzi, ukuba uthe umphefumlo wakhe ukuba akukho ukusetyenziswa kwempahla kwemithombo yakhe, ukuba belithe bakwenzelelele kungangcwatywa: ngokuphathelele umntu onjalo, Ndivakalisa ukuba umntwana aziphunzanga ilungile kunaye.
6:4 Kuba ifika ngaphandle njongo yaye eqhubekela ubumnyama, kwaye igama lakhe liya alucimi, zisabonakala.
6:5 Uye ayilibonanga ilanga, okanye waqaphela umahluko phakathi kokulungileyo nokubi.
6:6 Nokuba sithi ubomi iminyaka engamawaka amabini, kodwa ndiyathanda okulungileyo, yilowo ukungxama enye kwindawo efanayo?
6:7 Yonke imigudu yomntu uyenzela umlomo wakhe, kodwa umphefumlo wakhe aziyi kuzaliswa.
6:8 Yintoni na isilumko leyo ngaphezu yezinyabi? Kwaye wenza ntoni wehlwempu baye, ngaphandle ukuqhubeka phambili kuloo ndawo, apho kukho ubomi khona?
6:9 Kukulungele ukubona into enisukuba niyithanda, kunokuba ukufisa awukwazi wazi. kodwa lo, kakhulu, nto yanto yaye ngokukhukhumala zomoya.
6:10 Umntu uya kuba kwixesha elizayo, igama lakhe sele kuthiwa. Kwaye kuyaziwa ukuba yindoda nokuba nako ukubambana ekugwebeni omnye ngubani onamandla kunaye.
6:11 Kukho amagama amaninzi, kwaye uninzi lwezi, iimbambano, ubambe wokulahlekelwa kakhulu.
7:1 Kutheni kuyimfuneko ukuba umntu afune izinto ezinkulu kunaye, xa engayazi into kusilungele, yena ebomini bakhe, ngexesha ngokwenani leentsuku alapha, kwaye ngeli xesha idlule njengesithunzi? Okanye ngubani na oya kuba nako onokumxelela into eya kubakho kwixesha elizayo emva kwakhe phantsi kwelanga?
7:2 Igama elilungileyo lingaphezulu amahle axabisekileyo, yaye umhla wokufa ulunge ngaphezu komhla wokuzalwa.
7:3 Kulungile ukuya endlwini yesijwili, kunokuba ukuya endlwini yemigidi. Ngokuba yangaphambili, sikhuthazwa malunga isiphelo sezinto zonke, ukuze abaphilayo cinga oko kubakho kwixesha elizayo.
7:4 Umsindo ulunge ngaphezu kokuhleka. Kuba intliziyo iyalunga bububi bobuso, umphefumlo lowo onecala ukuze alungiswe.
7:5 Intliziyo yesilumko indawo lokuzila, intliziyo yezinyabi yindawo nemihlali.
7:6 Kubhetele ukuba ukulungiswa indoda elumkileyo, kunokuba sikhohliswe indumiso lobuxoki yezinyabi.
7:7 Kuba, njengokuqhuqhumba kwevaba ngaphantsi kwembiza, kunjalo ukuhleka yesidenge. kodwa lo, kakhulu, i yobubanzi.
7:8 A manga Ogxugxisa indoda elumkileyo utheza Iliwa lentliziyo yakhe.
7:9 Ukuphela abantetho ulunge ngaphezu ekuqaleni. Umonde ungcono ikratshi.
7:10 Musa ukukungxamela susumeteleka ku umsindo. Ngokuba ingqumbo ilala iintsinga yesidenge.
7:11 Akufunekanga bathi: "Ucinga ukuba yintoni isizathu ukuba kumaxesha angaphambili ngcono kunale meko kuyiyo ngoku?"Kuba lo hlobo mbuzo bubudenge.
7:12 Wisdom kunye nobutyebi kuluncedo kakhulu ngcono, kwabo ukubona ilanga.
7:13 Ngokuba ubulumko ikhusela, ngokunjalo ke imali ukukhusela. Kodwa, nobulumko oku kakhulu ngakumbi: ukuba anike ubomi kumntu anazo kuzo.
7:14 Cinga imisebenzi kaThixo, ukuba akukho namnye unako ukulungisa lowo ulidelile.
7:15 Kumaxesha emihle, ukwenza izinto ezilungileyo, kodwa qaphela ngexesha elibi. Kuba kanye njengokuba uThixo ukumisa elinye, ngokunjalo nezinye, ukuze umntu engafumani nasiphi na isikhalazo nje ngaye.
7:16 Ndabona lo, ngemihla yam engamampunge: umntu nje batshabalalayo ubulungisa bakhe, kunye nendoda abangahloneli Thixo ophila ixesha elide ebubini bakhe.
7:17 Musa ukuzama ukuba ukhathazeke nje, kwaye musa ukuzama ukuba sisilumko ngakumbi kunokuba kuyimfuneko, funa libubutyhakala.
7:18 Musa ukusebenza ngayo yonke yokungahloneli Thixo omkhulu, kwaye musa ukukhetha ukuba bubudenge, hleze ufe lingekabi lixesha lakho?.
7:19 Kulungile ukuba ukuxhasa umntu nje. Ngaphezu, kufuneka ungasiphumzi isandla sakho kuye, ngokuba lowo owoyika uThixo, indiva lutho.
7:20 Ubulumko eyomelezile isilumko abathetheli ngaphezu kweshumi umzi.
7:21 Kodwa akukho mntu ulilungisa emhlabeni, wenza okulungileyo, angoni.
7:22 Ngoko ke, musa baqhoboshele intliziyo yakho kuwo onke amazwi luxelwa, hleze ude uve isicaka sakho bethetha kakubi ngawe.
7:23 Ukuze isazela sakho uyazi ukuba, kakhulu, ngokuphindaphindiweyo uthethe kakubi ngabanye.
7:24 Ndizilingile zonke ngobulumko. Mna ndathi: "Ndiya kuba nobulumko." Ubulumko warhoxa akude kum,
7:25 kakhulu ngakumbi kunokuba kwakunjalo ngaphambili. Ubulumko likhulu kakhulu, ngubani na oya lobutyhila bakhe?
7:26 Ke ndimncinile zonke izinto umphefumlo wam, ukuze ndazi, bagqale, kwaye ifume ubulumko nesigqibo seengcinga, ukuze ndibe ingqalelo ukungahloneli Thixo yesidenge, kwaye lulahlekiso imprudent.
7:27 Kwaye ndiye ndafumanisa umfazi ikrakra ngaphezu kokufa: yena lowo ufana ngumgibe umzingeli, kwaye Yimpenduka entliziyweni bufana nomnatha, intliziyo yayo, ezandla zifana zingamakhamandela. Olungileyo phambi koThixo uya abalekele kuyo. Kodwa lowo umoni uya kubanjwa yiyo.
7:28 Khangela, INtshumayeli uthe, Ndiye ndafumanisa ezi zinto, enye emva kwenye, ukuze ndibe onokuwutyhila ingcaciso
7:29 obumana ukuyifuna umphefumlo wam ufuna waza wafumana. Enye indoda enye ewakeni, Ndiye ndafumanisa; ibhinqa phakathi kwabo bonke, Andifumananga.
7:30 Oku bubodwa I Ndafumanisa: ukuba uThixo wamenza umntu olungileyo, ukanti uye onakalisa ngokwakhe imibuzo ezingenakubalwa. Ngubani na ke omkhulu onjengesilumko? Yaye ngubani na oyaziyo intsingiselo yeli gama?
8:1 Ubulumko umntu kukhanya ubuso bakhe, kwaye nkqu ukubonakaliswa ndoda inamandla iya kutshintsha.
8:2 I balalele emlonyeni kakumkani, nomyalelo isifungo kuThixo.
8:3 Musa ukuphuma ungxamile, barhoxe ebusweni bakhe, kananjalo ukuba ahlale ngesenzo esibi. Kuba konke emkholisayo, yena uya kwenza.
8:4 Ke ilizwi lakhe lizele igunya. Akekho umntu unako ukuba athi kuye: "Kutheni na ukuba wenza ngale ndlela?"
8:5 Ogcina umyalelo akayi kubona ububi. Intliziyo yesilumko uyayiqonda ixesha lokuba aphendule.
8:6 Ngokuba yonke imicimbi, kukho ixesha kunye ithuba, kwakunye nobunzima ezininzi, ngokuba umntu.
8:7 Kuba engasazi elidlulileyo, yaye uyakwazi ukwazi nento elizayo esebenzisa isithunywa.
8:8 It is ngamandla umntu ukuthintela umoya, akamfuni umntu abe negunya phezu imini yokufa, yaye wavumela ukuba kuphumla xa impi, yaye akayi yokungahloneli asindise abangahloneli Thixo.
8:9 Mna ingqalelo zonke ezi zinto, yaye ndiye ndayinikela intliziyo yam ngemigudu yonke imisebenzi leyo ezenziwayo phantsi kwelanga. Maxa wambi umntu ulawula phezu komnye, kube ububi yakhe.
8:10 Ndimbonile abangahloneli Thixo bengcwatywa. le efanayo, ngoxa wayesaphila, baba endaweni engcwele, kwaye banconywa kwisixeko njengabasebenzi yobulungisa. kodwa lo, kakhulu, i yobubanzi.
8:11 Ngokuba oonyana babantu benze ububi ngaphandle koloyiko, ngenxa yokuba isigwebo sasingachazwa ngokukhawuleza nxamnye ububi.
8:12 Kodwa nangona umoni ukwenza okubi izihlandlo ezilikhulu, kwaye ngokomonde kodwa ukunyamezela, Ndiyaqonda ukuba kuya kulunga kwabamoyikayo uThixo,, ngubani makahloniphe ubuso bakhe.
8:13 ke, kwanga kulunge elimisiweyo abangahloneli Thixo, kwaye imihla yakhe ingalibali. Kwaye ke abo musani ukuboyika ubuso beNkosi lidlule njengesithunzi.
8:14 Kukho nolunye ingamampunge, enzekayo ehlabathini. Kukho nje, ukuba kuye ububi yenzeke, ngokungathi benze imisebenzi elimisiweyo abangahloneli Thixo. Kwaye kukho ke abangahloneli Thixo, ngubani aqinisekile kakhulu, ngokungathi ilifa izenzo nje. kodwa lo, kakhulu, Ndithi ndigwebe mna ukuba amampunge enkulu kakhulu.
8:15 Kwaye, I badumisa imihlali, ngenxa yokuba kwakungekho Kumlungele umntu phantsi kwelanga, ngaphezu kokuba adle, asele, kwaye ukuba unentliziyo echwayithileyo, nangenxa asithabathe nto naye emigudwini yakhe, ngemihla yobomi bakhe, uThixo awunike kuye phantsi kwelanga.
8:16 Ndaza ndayinikela intliziyo yam, ukuze ndibe ukuze azi ubulumko, ukuze ndibe ukuqonda isiphazamiso uguqulela phezu komhlaba: kuba indoda, othatha akukho buthongo ngamehlo akhe, imini nobusuku.
8:17 Kwaye ndaqonda ukuba umntu uyakwazi ukufumana ayikho incazelo bonke abo imisebenzi kaThixo okwenziwa phantsi kwelanga. Kwaye, ngakumbi ukuba esaphuka ukusifuna, kangaka le ngaphantsi wafumana. Ewe, ukuba umntu uthe izilumko ukubanga ukuba uyazi, akayi kuba nako kuzifumana.
9:1 Ndikutsalile zonke ezo zinto entliziyweni yam, ukuze ndibe ukuze baqonde ngenyameko. Kukho amadoda nje kwakunye amadoda alumkileyo, kunye nemisebenzi yabo, isesandleni sikaThixo. Ukanti umntu akazi kakhulu njengoko enoba uyakufanelekela uthando okanye intiyo.
9:2 Ke zonke ezi zinto kwixesha elizayo kuhlala abaqiniseki, ngokuba zonke izinto zenzeka ngokulinganayo kwabalungisayo ukuya abangahloneli Thixo, ukuya okulungileyo nokuba kokubi, kwabahlambulukileyo kunye koyinqambi, abo amadini kunye kwabandigibayo imibingelelo. Njengoko i ezilungileyo, ngokunjalo nabo bengaboni. Njengoko abo abenza olukhohlisayo are, ngokunjalo abo bafunga inyaniso.
9:3 Le umthwalo omkhulu kakhulu phakathi kwezinto zonke ezenzekayo phantsi kwelanga: ukuba izinto ezifanayo zehlela bonke abantu. Kwaye xa iintliziyo zoonyana babantu azele ulunya nendelo kubomi babo, emveni koko iya uyarhuqeka phantsi kwelabafileyo.
9:4 Akukho namnye ohleli ngonaphakade, okanye nokuba unentembelo kule nkalo. A inja esaphilileyo ilunge ngaphezu kwengonyama efileyo.
9:5 Ngokuba abadla ubomi bayazi ukuba baya kufa, kodwa ngokwenene abafileyo abazi lutho kwakhona, kananjalo aniqondi ukuba unayo nayiphi na impatho. Kuba ukukhunjulwa kwabo olityelweyo.
9:6 Ngokufanayo, uthando inzondo nomona bonke batshabalala kunye, asibenzanga nto, nayiphi na indawo kweli phakade kwaye umsebenzi senzekayo phantsi kwelanga.
9:7 Ngoko ke, hamba uze udle isonka sakho ninemihlali, usele iwayini yakho nangemihlali. Ngokuba imisebenzi yakho siyamkholisa uThixo.
9:8 Iingubo zakho mazibe mhlophe ngamaxesha onke, uzichithachithe neoli bikho entlokweni yakho.
9:9 Hlala kakuhle nomfazi omthandileyo, yonke imihla yobomi bakho ekungaqinisekwanga ezithe zanikwa kuwe phantsi kwelanga, ebudeni balo lonke ixesha bakho obungamampunge. Kuba oku sisabelo sakho eso ebomini, nasemigudwini yakho, nge owaphuka yiyo phantsi kwelanga.
9:10 Nokuba isandla sakho uyakwazi ukwenza, wenze ngenkuthalo. Ngokuba akukho msebenzi, kananjalo aniqondi, nakulumka, kungekho lwazi luya kubakho ngokufa, bebhekisa kulo bayagxalathelana.
9:11 Ndazijika mna, wabheka komnye into, kwaye ndabona phantsi kwelanga, ukugidima asikokwabanamendu, ukugidima asikokwabanamendu, imfazwe asiyeyamagorha, nasonka isilumko, nobutyebi ngokwabafundileyo, okanye lubabalo ku ngabanobuchule: kodwa kukho ixesha kunye nesiphelo kuzo zonke ezi zinto.
9:12 Akalazi umntu isiphelo yakhe. kodwa, kanye njengokuba njengeentlanzi ezibanjiswa ngentola, kunye neentaka bayabanjwa ngentsimbi yokuthiyela, ngoko ke abantu kubanjwa ngexesha lobubi, xa ngesiquphe kokugubungela kuzo.
9:13 le ubulumko, ngokufanayo, Endibubonileyo phantsi kwelanga, Mna asixilonge kakhulu.
9:14 Kwakukho isixeko esincinane, nge amadoda ambalwa. Kweza kuwo ukumkani omkhulu, wawungqinga ngubani, wakha iinqaba zonke ngeenxa zonke, kwaye ukuqapha igqitywe.
9:15 Kwaye kwafunyanwa khona ngaphakathi kuyo, indoda elusizana, esisilumko, kwaye ekhulula isixeko ngobulumko bakhe, yaye akukho nto yabhalwa emva koko laloo ndoda ilihlwempu.
9:16 Kwaye, Ndazixela Bulunge ubulumko ngaphezu kobugorha. Kodwa kwenzeka kanjani ukuba, ke, ukuba ubulumko beli hlwempu iphathwa ngendelelo, kunye namazwi akhe azinikezelwanga bekhuthazwa?
9:17 Amazwi ezilumko achotshelwa cwaka, ngaphezu isikhalo yinkosana phakathi yezinyabi.
9:18 Bulunge ubulumko ngaphezu kweempahla zokulwa. Kwaye nabani onecala into enye, uya kuphulukana izinto ezininzi ezilungileyo.
10:1 iimpukane Ukubhubha ukulonakalisa ubumnandi lamafutha lawo aqholiweyo. Ubulumko uzuko Bunqabile bona ngaphezu ubudenge emfutshane nokunqongophala.
10:2 Intliziyo yomntu osisilumko esandleni sakhe sokunene, yaye intliziyo yendoda yesidenge esandleni sakhe sasekhohlo.
10:3 Ngaphezu, njengendoda osisiyatha uhamba endleleni, nangona yena ngokwakhe asibobulumko, ucinga wonke umntu abe sisidenge.
10:4 Ukuba umoya lowo unegunya liphuma phezu kwenu, musa ukuyishiya indawo yakho, ngokuba ukuqapha kuya kubangela yezono ezinkulu apheze.
10:5 Kukho ububi endibubonileyo phantsi kwelanga, uvela phambi inkosana, njengokungathi ngempazamo:
10:6 umntu osisinyabi onokuqeshwa isidima eliphezulu, kwaye izityebi zihleli ngaphantsi kuye.
10:7 Ke ndizibone izicaka zikhwele emahasheni, namatshawe ehamba phantsi ngeenyawo abakhonzi.
10:8 Umntu owomba umngxuma kweyela kwayena kuwo. Kwaye nabani na ususa ngaphandle uthango, inyoka ithe yaluma kuye.
10:9 Bonke abasusa amatye ziya kwenzakaliswa ngabo. Kwaye nabani na ogqobhozela phantsi imithi ziya ababuleweyo ngabo.
10:10 Ukuba intsimbi ithe yaba buthuntu, kwaye ukuba kwakungenjalo ngaphambi kokuba, kodwa sele zenziwe buthuntu yi unenzondelelo enkulu, ke kuya kukhula. Kwaye ubulumko buya kulandela emva kukhuthalela.
10:11 Nabani Omhlebayo ngasese nto ngaphantsi kwe nenyoka buluma cwaka.
10:12 Amazwi aphuma emlonyeni indoda zezilumko zaziwa ngokuba, kodwa imilebe umntu osisidenge uya bamphose ezantsi ngogonyamelo.
10:13 Ekuqaleni yamazwi akhe bubudenge, kwaye ekupheleni intetho yakhe impazamo ezinzima.
10:14 Isidenge sandisa amazwi akhe. Umntu akazi ukuba yintoni uye waba phambi kwakhe, ngubani na ke onako ukumtyhila kuye okuya kubakho kwixesha elizayo emva kwakhe?
10:15 Nenkxamleko yezinyabi abayi kubaxhwalekisa abo bangamaziyo ukuya emzini.
10:16 Yeha, nina, eli lizwe likumkani umfana, , limatshawe kudla kwakusasa.
10:17 Hayi, uyolo lizwe likumkani ezindilekileyo, , limatshawe adlayo ngexesha elifanelekileyo, ngokuba ukuhlaziyeka kungekhona kukuzingca.
10:18 by nobuvila, sikhokelo iya kuphoswa phantsi, yaye ubuthathaka kwezandla, indlu iya ukuyisonga nge.
10:19 Nakuba ehlekisayo, benza isonka newayini, ukuze bazi abahleliyo anelise. Kwaye zonke izinto ethobela imali.
10:20 Kufuneka ukumnyelisa ukumkani, nakwiingcinga zakho, kwaye kufuneka ukuthetha kakubi indoda esisityebi, nkqu egumbini lakho langasese. Kuba nkqu iintaka zezulu ziya yolihambisa elo zwi, kwaye nantoni na enamaphiko kubhengeza uluvo lwakho.
11:1 Siphose isonka sakho phezu kwamanzi aphilileyo. Kuba, emva kwexesha elide, uya kuwufumana kwakhona.
11:2 Yahlula izahlulo zibe sixhenxe, yaye ngenene zibe sibhozo. Ngokuba akuyazi into embi ukuba abe phezu komhlaba kwixesha elizayo.
11:3 Ukuba amafu nihluthiyo!, baya mawumpompoze imvula phezu komhlaba. Ukuba umthi uthe wawa, wabheka ezantsi, nokuba uthe wabheka entla, okanye naluphi na ulwalathiso ukuze bawe, apho uya kuhlala.
11:4 Umntu oyithobelayo umoya akayi kuyihlwayela. Kwaye nabani iqwalasela amafu soze uvune.
11:5 Ngendlela efanayo ukuba awuyazi na indlela yomoya, okanye indlela amathambo inamathelene esizalweni somfazi okhulelweyo, ngoko awuyazi imisebenzi kaThixo, ngubani na uMenzi bonke.
11:6 Ekuseni, imbewu yakho, kunye ngokuhlwa, musa ukuvumela ziyayeka isandla sakho. Kuba awuyazi ukuba yeyiphi kwezi ongama, enye okanye enye. Kodwa ukuba zombini vuka ndawonye, kakhulu ngcono.
11:7 Ukukhanya simnandi, kwaye bunomtsalane emehlweni ukulibona ilanga.
11:8 Ukuba uthe wadla ubomi iminyaka emininzi, ukuba uye wavuya kuzo zonke ezi, Kufuneka ke akhumbule imihla emininzi ngamaxesha obumnyama, leyo, xa aya befika, kunimangalela elidluleyo yanto.
11:9 Ngoko ke, nemihlali, O ndodana, ebutsheni bakho, ichwayithe intliziyo yakho ukuhlala okulungileyo ebudeni ngemihla yobutsha bakho. Uze uhambe ngeendlela zentliziyo yakho, kunye kwimbono amehlo akho. Kwaye siyazi ukuba, ngazo zonke ezi zinto, UThixo uya kukusa ematyaleni.
11:10 Susa ingqumbo entliziyweni yakho, simisiwe ububi enyameni yakho. Ngokuba ubutsha nobumnandi zezona engenanto.
12:1 Khumbula uMdali wakho ngemihla yobutsha bakho, phambi nangexesha lembandezelo kufika iminyaka besondela, ngokuba apho uya kuthi, "Aba nga tsakisi kum."
12:2 Ngaphambi kokuba ilanga, kwaye ukukhanya, nenyanga, kunye neenkwenkwezi, engekabuyi amafu emva kwemvula,
12:3 xa abagcini bendlu ziya kungcangcazela, kwaye namadoda anamandla uya uhambahamba, kunye nabo usile okuziinkozo bayahiliza, ngaphandle inani elincinane, kunye nabo ngemehlo keyholes liya kwenziwa mnyama.
12:4 Kwaye baya sizivale iingcango esitratweni, xa izwi lowo lisila ingqolowa uya kuthotywa, kwaye ziya kuphazamiseka kwi isandi into endiza, ke zonke iintombi zengoma ziya kuba zizithulu.
12:5 Ngokufanayo, Baya kuloyika izinto ngaphezu kwazo, kwaye baya kunkwantya ngendlela. Umthi amangile iya kuchuma; inkumbi uya atyetyisiweyo; nesityalo ligqabhuke uya saa, ngenxa yokuba umntu ndinyuke ndiye endlwini ingunaphakade lakhe, kwaye abantu baya ezula ejikeleza kwi ezitalatweni.
12:6 Phambi kokuba intambo yesilivere yaphukile, kwaye band segolide siyakrazula, kunye nomphanda Utyunyuziwe phezu umthombo, kwaye ivilana yaphulwe ngaphezu umthombo,
12:7 kwaye uthuli lubuyela emhlabeni wayo, ukusuka kwayo, yaye umoya ubuyela kuThixo, ngubani Yamvumela.
12:8 Amampunge leze, wathi INtshumayeli, kwaye yonke into ingamampunge!
12:9 Yaye ekubeni INtshumayeli ulumke gqitha, efundisa abantu, yaye wachaza oko kwafezwa. Kwaye zifuna, eloba imizekeliso emininzi.
12:10 Wacinga amagama luncedo, waza wabhala amagama kakhulu olungileyo, ezazizele inyaniso.
12:11 Amazwi ezilumko abukhali oku kwentonga ngoviko, neenzipho ezifana abe eqiniselweendlwini, ajikeleza kakhulu, leyo, ngokusebenzisa icebo ootitshala, imisiwe ngenxa umfundisi.
12:12 Kufuneka akudingi ngaphezu koku, unyana wam. Kuba akukho siphelo ukwenza iincwadi ezininzi. Kwaye ukufunda kakhulu yindlela imbandezelo inyama.
12:13 Makhe sonke Masilalele ndawonye ekupheleni kwintetho. ukoyika uThixo, kwaye bagcine imiyalelo yakhe. Oku yonke into umntu.
12:14 Kwaye, ngokuba konke oko kwenziwa kwaye isiphoso ngalinye, UThixo uza kuzisa umgwebo: enoba intle okanye imbi.